Biyo la aan laga soo sheegayo gobolka Shabeellaha Dhexe – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeWararka SoomaaliaBiyo la aan laga soo sheegayo gobolka Shabeellaha Dhexe
Biyo la aan laga soo sheegayo gobolka Shabeellaha Dhexe
Hiiraan Xog, Feb 14, 2018:- Madaxweyne ku xigeenka maamulka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaawe oo la hadlay Warbaahinta ayaa sheegay in biyo la’aan ay ka jirto degaano ka tirsan maamulka Hirshabeelle.
Waxaa uu sheegay in markii Wabiga uu guray in dadka kunool tuulooyin ku yaalla duleedka magaalada Jowhar in ay soo wajahday biyo La’aan baahsan.
Waxaa uu sheegay in dadkaasi ay u baahan yihiin in si deg deg ah loo caawiyo Maadaama ay dhibaateysan yihiin.
Shacabka Soomaaliyeed ayuu ugu baaqay in lasoo caawiyo dadkaasi, isagoona sheegay in maamulka Hirshabeelle ay qaadan doonaan doorkooda ku aadan badbaadinta dadkaasi.
Degaano badan oo ku yaalla Duleedyadda Magaalooyinka Baledweyne iyo sidoo kale magaalada Jowhar ayaa xilliggaan waxaa ka jira Biyo La’aan Ba’an ka dib markii uu guray Wabiga Shabeelle.
Al-Shabaab oo madafiic ku garaacay saldhiga ciidamada dalka Kenya
Wasiirka Tamarta iyo biyaha oo ka hadlay biyo la aanta wabiga Shabeelle